Basadingeka abesifazane emkhakheni wezokwakha | Isolezwe
Basadingeka abesifazane emkhakheni wezokwakha
Isolezwe / 5 July 2012, 10:37am / LUNGI LANGA
UNKSZ Nontuthuko Chiluvane oyi Chief Quantity Surveyor eMnyangweni wokuHlaliswa kwa Bantu KwaZulu-Natal ufisa ukubona abesimame bengena kwezokwakha
YIZE banda abasifazane abangena emkhakheni wezokwakha liselikhulu igebe. UNkk Nontuthuko Chiluvane (29) waseMandeni oyi-Chief Quantity Surveyor eMnyangweni wokuHlaliswa kwaBantu, KwaZulu-Natal uthe isikhathi eside okudingeka usichithe ufunda noma uthola ulwazi lokwenza lo msebenzi ngaphambi kokuthi uthole isitifiketi sokuzimela kungaba yikho okudala ukuthi bangabi baningi ngokufanele abesifazane abaphumelelayo kuwo.
“Awuthi uqeda ukufunda iminyaka emithathu enyuvesi bese uba ngu-Quantity Surveyor ongakwazi ukusebenza azimele. Kudingeka ukuthi uqhubeke nokufunda bese uthola ithuba lokusebenza kulo mkhakha (experiential training) ukuze ukwazi ukuthola lesi stifiketi,” kusho uNkk Chiluvane.
Esakhe usithole ngonyaka odlule manje usengakwazi ukusebenza azimele nokuthi aqale eyakhe inkampani ezimele.
Uthe yize bekhona abesifazane asebephumelele kuwo basebancane abaqedile nabangakwazi ukuzimela baqale ezabo izinkampani. Kusaqhoqhobele abantu besilisa ikakhulu labo abangena kuwo ngezikhathi zakudala.
Yena ungene kuwo ngoba efuna ukwenza izifundo zesayensi nezezimali kanye kanye, okuyinto abaningi abebengazitsheli ukuthi iyenzeka.
Uthe wayengaba usosayensi noma asebenze kwezezimali kepha ngoba wayekufuna konke wakhetha iQuantity Surveying.
Umsebenzi wakhe uhlanganisa ukwenza izibalo zezinhlelo zokwakha . Nguye obheka izinkampani ezakha amabhilidi ngokuqashwa wuMnyango ukuthi zihambisa ngakho yini kwezezimali.
Ubheka ukuthi imali abathi kuzobathatha yona ukwakha iyiyo yini.
“Yonke into abasuke bekhuluma ngayo kusuke kuyinto engiyaziyo. Ngazi kahle ukuthi yini edingekayo uma kwakhiwa nokuthi kungalindeleka ukuthi ibize malini,” kusho uNkk Chiluvane.
Iningi labantu lizitshela ukuthi iQuantity Surveying ifana neCivil Engineering ngoba konke kuthinta ukwakha.
“Uthe yize kucishe kufane esikwenzayo ngeke uzitshele ukuthi unganeQuantity Surveyor bese ungatholi umuntu oyiCivil Engineer ngoba lona oyedwa ngeke akwazi ukwenza wonke umsebenzi. Omunye ubheka ukuthi indlela okwakhiwa ngayo iyiyo yini kanti lona omunye ubheka ukuthi imali esetshenzisiwe ifanelekile yini,” kuchaza uNkk Chiluvane.
Wexwayise abafuna ukungena kulo mkhakha ukuthi banganciki ekutheni bafunde ezikhungweni ezingama-Technikon kuphela kepha baye nakumanyuvesi.
Uthe iningi labafundi liyasaba ukuya kumanyuvesi ngoba lesaba ukuthi ngeke liphumelele.
“Akukho okunzima kulo mkhakha. Uyakwazi ukuphumelela uma uzimisele ngokwenele,” kusho uNkk Chiluvane.